Mas’uul katirsan Somaliland oo lagu diley Laascaanood iyo faahfaahin ka soo baxaysa.
November 18, 2020 Xuseen 9
Puntlandtimes (Laascaanood)-Magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool ayaa habeenimadii xalay ahayd waxaa lagu diley AUN Mid kamid ah saraakiisha maamulka Somaliland ee gobolkaasi.
Goob joogayaal ku sugan magaalada Laascaanood ayaa xaqiijiyey in rag hubaysani ay toogteen mid kamid ah bahda garsoorka Somaliland ee gobolka Sool gaar ahaan magaalada Laascaanood.
Dablay hubaysan ayaa toogasho ku dilay nin Lagu Magacaabo Cabdilaahi Salaad Wadaad-yare, oo ka tirsana maxkamada Laascaanood ee maamulka Somaliland.
Horay waxaa magaalada Laascaanood uga dhacay dilal kala duwan iyadoona qarax lagu diley guddoomiyihii hore ee maxkamadda gobolka Sool ugu magacawnaa maamulka Somaliland oo aysan ciddana war dambe ka soo saarin.
Muxuu yiri Feysal Cali Waraabe, ilaa aad ka aqbashaan lacagta Somaliland oo ay ka shaqeyso Laascanood iyo meel kasta oo ka mid ah SSC gumaadka dhulbahante waa lagu wadayaa oo lagama deynayo.
Sababtuna waxay tahay lacagta Somaliland waxay la mid tahay dollarka waxay leedahay qiimo, ma ha lacag been abuur sida ta laga isticmaalo koonfurta iyo Puntland.?
Saeed, lacagta waxaa lagu qiimeeyaa Dahabka ka yaal Central Bank & wax soon saarka dalkaas. Maxay Sland soon saartaa oo aan Qabiil qaawan ahayn?
Saed beenta laga wanaagsan.
Somaliland Waa BANAANALAND.
Waxaa yaqaana IIDOOR IYO CAADAQAATAYAAL HARTI.
Lacagtooda Waa sharci daro.
Somaliya Waa dal la yaqaan.
Runta ayaan sheegay , kama hadlayno qabyaalad waxaan ka hadlaynaa lacag. Hal dollar waa imisa Somaliland iyo somali shilin noo sheeg? miyaad ilaawday lacagtii been abuurka ahayd ee lagu qabtay Puntland?
Waxaan ubaahanahay runta in an nafteena u sheegno.
Ma Somalilanders ba Qabiil qaawan ah, miskiin, maalmaha soo socda waxay kuu sheegi doontaa Inuu jiro dal weyn oo la yiraahdo Republic of Somaliland and a great people called Somalilanders.
Waxaa layaab leh waxa si gaar ah loogu bartilmaameedsaday saraakiisha garsoorka iyo maxkamadaha! Ma dhici kartaa in ay aqoon u leeyihiin diinta iyo Shareecada oo sidaa loogu dawgalay? Mise xukun iyo gar-eexo ayey rideen?
Runtii waa wax layaab leh garsoonka Laascaanood waxa galay waxayse u badan tahay in dheeli ka jiro xaga garsoorka iyo Aano qabiil, waayo aad bay usoo noqnoqatay sheekadani,inkastoo dhulka somalidu garsoorkoodu yahay Eex iyo laaluush iyo ii dhiib aan kuu dhameeyee,
Waxaan aad uga xumahay Haldoorkaa la gumaadayo ilaahay haw naxariisto marxuumka, dhagarqabayaasha waa in lasoo qabtaa cadaalada la marsiiyo Qadhaadhkana Dhadhamiyaan.
Ka weynaw kana kor Qabyaaladan iyo naxligan ku biyo dhigtay, bal isku day inaad bogan wax kusoo koriso dood, caqli, iyo waano iyo hoga tusaalayn,,
Marnaba dadka reer somaliland qof soomaali ah dhib lama jecla waxay jecel yihiin walaalahooda somaliyeed oo badhaadhe iyo nabad marwalba gaadha, laakiin hadii shaqsi uu kelmad yara adag yidhaahdo waxa lagu shaanbadeeyaa Qabiilka ISAAQA oo dhan ama reer somaliland.
Siyaasadu waa halkeeda laakiin in qabiilada la duro ama la caayo ma wanaagsana Akhlaaq iyo diin dhaqan toona maaha.
Jamaamuu ayaa dad waaninaya yaa ila qosla oo weliba ka waaninaya qabyaalad lol Taiwan warkeeda cidii dheg u dhigeysaa iyadeey jirtaa? SNM iyo qabyaalad are twins.